I-TPU edandayo yefowuni yefowuni, ibhegi eyomileyo yefowuni eyomileyo | Zone
1. I-Poboof yefowuni ye-Waterproof: I-PAIN YABANTSI YOKUGQIBELA I-PAINT YOKUGQIBELA I-Pouch yenza ukuba iifowuni zakho zisebenzela emanzini, kwaye zithintela isixhobo sakho siphulukana& Ukuhamba emazantsi emanzini. Kukwenza wonwabe kwimidlalo yamanzi kunye nemisebenzi yamanzi ngaphezulu. QAPHELA: Ihambelana nazo zonke iifowuni ezi-smart kunye neemeko zabo ezininzi. Ukuba iifowuni ezinkulu kunye necala labo elikhulu nelinzima, akunakufihlaka, kwaye nceda ususe iimeko zabo ezinzima, kwaye isikhwama sokweza amanzi siya kuba nokuntywila;
2. Nika ukuya kuthi ga kwi-65 yeenyawo zomsebenzi we-IPX8. Igcina ifowuni yakho ikhuselekile& yomile ukusuka emanzini, imvula, ukufuma, ukuchitheka, kumanzi kunye nobumdaka. Ulwanga lwamanzi, ulwandle luphezulu, i-diperproof, i-promoof. Unokubeka amakhadi etyala, ilayisensi, imali kunye nezinto ezimbalwa ezincinci;
3. Ukuchukumisa okuchukumisayo: Ingxowa yefowuni inika i-crystal icinyiwe kwiWindows ebalaseleyo kumacala omabini wenziwe ngezinto ezinobunzima obuqaqambileyo 0.3 mm. Kugqibelele ukuthatha imifanekiso okanye iividiyo, ukhangela ii-imeyile, kwaye yonke enye into echukumisayo isebenza ukuba uyaqubha, ukuloba, ukuboleka amanzi. Qaphela: ungangcono unefowuni ngokubekwa kwekhamera, emva koko uhambe ngaphantsi kwamanzi kwaye usebenzise iqhosha lefowuni (hayi isikrini) ukuba uthathe umfanekiso okanye ividiyo;
1. Vavanya umsebenzi wamanzi kunye nezicubu ngaphambi kokuba nise;
4. Kulula ukuyifaka okanye ikhuphe iifowuni ezi-smart emva kokubetha ngendlela embalwa yokusebenzisa.
Eyona nto iphambili kwi-TPU i-TPU edadayo yefowuni yefowuni, ifowuni yefowuni eyomileyo ibhegi ye-UniverProof ye-Iphord ye-iPhone